News - ကိရိယာတန်ဆာပလာဘဝတိုးပွားရန်နည်းလမ်းခြောက်ခု
လက်ဆောင်ဘဝတစ်ဦးဆေးထိုးမှိုထုတ်လုပ်သူများ၏အမြတ်အစွန်းထိခိုက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ ပုံသဏ္makeာန်သက်ရောက်စေရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုပါကကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းကိုများစွာတိုးတက်လိမ့်မည်။ ဤတွင်မှိုဘဝတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။
1. မှန်ကန်တဲ့မှိုသော့ခတ်အင်အားသုံး setting
မှိုတစ်ခုစီအတွက်သော့ခတ်အားမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ အော်ပရေတာသည်သော့ခတ်အားနည်းလွန်းပါကဆေးထိုးဖိအားသည်မှိုသော့ခတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ တစ်ဦးအော်ပရေတာအလွန်အကျွံသော့ခတ်အင်အားကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက, စက်ကိုပုံသွင်းဆေးထိုးအရှင် tool ကိုမထိခိုက်စေ, ဒေသများနှင့်မှိုအစိတ်အပိုင်းများကိုရင်ဖွအပိုင်းလိုင်းများပေါ်တွင်အလွန်အကျွံချုံ့လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
မှိုကိုကာကွယ်ရန်စာနယ်ဇင်းအပေါ်ဖိအားနိမ့်စွာထားခြင်း။ မြင့်မားသောဖိအားသော့ခတ်အနေအထားကိုအမှန်တကယ်မှိုအဆက်အသွယ်အနေအထားထက် ၀.၅၅ ပိုမြင့်ပါ။ မှိုသော့ခတ်မထားမှီတိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ဖိအားပိတ်ပစ်ဖိအားကိုလျှော့ချ။ ဤအချိန်တွင်ဖိအားသည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးဖိအားနိမ့်မှမြင့်မားသောဖိအားကိုသော့ခတ်ရန်မှိုမှလုံလောက်သောဖိအားကိုပေးသည်။
ထို့အပြင်မှိုကိုပိုမိုနီးကပ်သောအချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောမှိုပိတ်သောအချိန်လိုအပ်ချက်ထက် ၀.၅ စက္ကန့်ပိုမြင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမှန်တကယ်မှိုပိတ်ချိန်သည် ၀.၈၅ စက္ကန့်ဖြစ်ပါကမှိုပိတ်ချိန်ကို ၁.၃၅ စက္ကန့်ထားပါ။
Clamp မြန်နှုန်းသည်သံသရာလည်ပတ်မှုအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ သို့သော်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းများသည်ကိရိယာအသုံးအဆောင်သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနီးကပ်အစာရှောင်ခြင်းမှအနှေးနှေးသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်နှင့်တံသင်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုမတိုက်ဆိုင်မီနှေးကွေးသောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးမှိုထဲကပြီးနောက်ပွင့်လင်းအစာရှောင်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေါ်နှင့်အတူမှို breakaway နှင့်မှိုဖွင့်လှစ်အစာရှောင်ခြင်းအကြားအကူးအပြောင်းကိုလည်းချောမွေ့ကြောင်းသေချာပါစေ။
4. မှန်ကန်စွာထုတ် set up
မှားယွင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအချက်များကြောင့်အလွန်အကျွံလေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်ယူခြင်းကြောင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏သက်တမ်းတိုစေနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ကုန်ပစ္စည်းမှလိုအပ်သောခွဲထုတ်သည့်ပမာဏနှင့်အညီမှိုမှအစိတ်အပိုင်းများကိုမှန်ကန်စွာထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထုတ်လွင့်မှုအလွန်များလွန်းသော ejector pin များပေါ်တွင်ဖိအားများလွန်းလိမ့်မည်။ ဆေးထိုးပမာဏအပြင်ဆေးထိုးဖိအားကိုလည်းမကြီးသင့်ပါ။ ဖိအားသတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင်လိုအပ်သောပမာဏကိုသာသုံးပါ။
5. မှန်ကန်တဲ့မှိုရေလောင်း setting
မှိုအပူချိန်အလွန်မြင့်မားပြီးမှိုသက်တမ်းအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်, ထို့ကြောင့်မှိုအပူချိန်ကန့်သတ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အစိတ်အပိုင်းဗေဒများအတွက်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်။ ထို့အပြင်ရွေ့လျားနေသော tool ၏အခြမ်းနှင့်ပုံသေ tool ၏အပူချိန်ကွာခြားချက်သည် ၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျော်လွန်အောင်သေချာစေပါ။ ဒီအတိုင်းအတာအထက်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောမှို၏နှစ်ဖက်အကြားအပူပုံပျက်သောခြားနားချက်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်, မှို၏အဖွင့်နှင့်ပိတ်၏ပြproblemနာချောမွေ့မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်မှိုများ၏ wear သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
ထုတ်လုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မှိုများကိုအနိမ့်ဆုံးတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ၊ သန့်ရှင်းပေးပါ။ ဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင်ခြစ်ရာများ၊ ၀ တ်ဆင်ထားသော ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ burr နှင့်သတ္တုပြားများစသည့် ၀ တ်စုံလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ပုံမှန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲပါ၊ မှိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားပါ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြိမ်ရေကိုထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ရပ်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ ဆလိုက် slot နှစ်ခု greased ကြသည်နှင့်ဆလိုက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ detent ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် gibs များလျော့ခြင်းလက္ခဏာကိုဂရုပြုပါ
သင်တစ် ဦး ချင်းစီသန့်ရှင်းရေးနှင့်စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်မှိုမှထွက်သည့်အခါဆလိုက်မှန်ကန်သောအနေအထား၌တည်ကြောင်းသေချာပါစေ။ မှိုကို ၆ နာရီကျော်မသုံးနိုင်ပါကသံချေးတက်မှုကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် အသုံးပြု၍ သံချေးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စက္ကူနှင့်အရောင်တင်ခြင်းနေရာများကိုသေချာစွာဖုံးအုပ်ပါ။
သတ္တုထည့်သွင်းနှင့်အတူဆေးထိုးမှို, စိတ်ကြိုက်မှို, ပလပ်စတစ်ထည့်သွင်းမှို, မှိုစက်ရုံ, မှိုထုတ်လုပ်သူ, ရှေ့ပြေးပုံစံမှို Makers,